जैतूनको तेलको सबैभन्दा ठूलो उत्पादक र विश्वमा सब भन्दा राम्रो तेल | अर्थव्यवस्था वित्त
जैतुनको तेल भूमध्यसागरको सुन हो, हाम्रो दैनिक आहारको हिस्सा हो, र हामी जैतूनको तेल बिना कुनै खानाको कल्पना गर्दैनौं। के तपाईं जैतून तेल बिना टुम्का रोटी कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ? न तपाईं न कोही।
र यसको उपभोग अब इटालियन, ग्रीक र फ्रान्सेली भाइहरूसँग भूमध्यसागरको बेसिनमा मात्र सीमित छैन, तर यसको खपत बिस्तारै विश्वव्यापी भएको छ र देशहरू जहाँ यो उनीहरूको आहारको हिस्सा छैन, यो पहिले नै यसको हिस्सा हो।
स्पष्ट रूपमा, जब तपाइँको खपत बढ्छ, जैतुनको तेल 'सिट्युटमा' उत्पादन गर्ने आवश्यकतालाई पनि बढाउँदछ, ठूलो मात्रामा जैतुनको तेल आयात गर्नबाट जोगाउँदछ, उदाहरणका लागि, इटाली, विश्वको सबैभन्दा ठूलो जैतून तेल निर्यात गर्ने।
उपभोक्ताले निरोगी आहार खोज्ने लाखौं व्यक्तिहरूको आहार परिवर्तनको लागि धन्यवाद दिइरहेको छ जैतुनको तेलले धेरै स्वास्थ्य लाभ प्रदान गर्दछ, पाम, नरिवल वा परिष्कृत तेलको विपरित, जुन विश्वका धेरै देशहरूमा खपत हुन्छ।
यसले हामीलाई एउटा प्रश्नमा पुर्‍याउँछ:
0.1 विश्वमा सब भन्दा ठूलो जैतून तेल उत्पादक भनेको के हो?
1 १- स्पेन
1.1 2.- इटाली
1.2 3.- ग्रीस
1.3 - टर्की
1.4 -.- ट्युनिसिया
1.5 - पोर्तुगल
1.6 -.- सिरिया
1.7 देशहरू जुन विश्वमा सबै भन्दा राम्रो जैतूनको तेल उत्पादन गर्दछ
विश्वमा सब भन्दा ठूलो जैतून तेल उत्पादक भनेको के हो?
यो भन्न गाह्रो छ, किनकि सबै कुरा जस्तै, त्यहाँ विभिन्न क्षेत्रहरूमा बिभिन्न अग्रणी देशहरू छन्, र ती उत्पादनहरू, निर्यात र अधिक खपत गर्नेहरूको परिदृश्य जान्नु राम्रो हो।
यो लेख विश्व मा सबै भन्दा ठूलो जैतून तेल उत्पादक पत्ता लगाउन एक विश्लेषण हो।
भर्खर तपाईंसँग प्रतिशतको एक विचार छ: २०१ 2015 बीच र अहिलेसम्म यस वर्ष, करिब २2.6 मिलियन टन तेल जैतून तेल खपत भइसकेको छ।
यो आश्चर्यचकित गर्न सक्नुहुन्न कि स्पेन संसारमा सब भन्दा ठूलो जैतून तेल उत्पादक हो। विश्वव्यापी रूपमा खपत गरिएको जैतुनको of 45% उत्पादन गर्दछ; एक प्रभावशाली रकम।
क्षेत्र जुन प्रयोग भइरहेको छ जैतून रूखको पाँच मिलियन एकड छ।
स्पेनका लागि समस्या यो छ कि यो धेरै जसो इटालीमा निर्यात गरिएको छ, यो देश जसले यसलाई व्यवहार गर्दछ, र यसलाई स्पेनिश तेल भन्दा उच्च गुणस्तरको साथ निर्यात गर्दछ। इटाली, यसको फलस्वरूप, यसलाई विश्वभरिका देशहरूमा पुनः निर्यात गर्दछ।
हाम्रो देशले उत्पादन गर्ने जैतुन तेलको विशाल परिमाणको बाबजुद, यो अनुमान गरिएको छ कि २०% मात्र अतिरिक्त कुमारी तेल हो।
त्यस कारणका लागि, स्पेनसँग विश्वको सबैभन्दा ठूलो जैतुन उत्पादन गर्ने देशको उपाधि छ, तर उत्तम छैन।
स्पेनले उत्पादन गरेको ive 77% जैतुनको तेल अंडालूसियाबाट आउँछअत्यधिक उत्पादनको बाबजुद, स्पेनले ठूलो मात्रामा जैतुनको तेल आयात गर्दछ।
इटालीले २ive% जैतुनको तेल उत्पादन गर्दछ जुन विश्वमा खपत हुन्छ, र स्पेनको विपरित, यसको ख्याति वा पदवी छ, जुन संसारमा सब भन्दा राम्रो जैतूनको तेल उत्पादन गर्ने हो।
इटालियन जैतुनको तेलको मुख्य विशेषता यो हो कि यसमा विभिन्न प्रकारका स्वाद र शैलीहरू छन्, उदाहरणका लागि, हाम्रो देशमा यो छैन। यो अनुमान गरिएको छ इटालीको यसको ग्यास्ट्रोनमीमा 700०० विभिन्न किसिमका जैतुनको तेल छ।
यद्यपि इटालीले स्पेन जत्तिकै जैतुनको तेल उत्पादन गर्दछ, यो विश्वमा सबैभन्दा ठूलो जैतुनको तेल निर्यातकर्ता हो, किनकि यसले स्पेन, मुख्यतया, ग्रीस जस्ता अन्य देशहरूबाट ठूलो मात्रामा तेल आयात गर्दछ र तिनीहरूलाई फरक दिनको लागि व्यवहार गर्दछ। विविधता, र त्यसपछि तिनीहरूलाई निर्यात।
यसले इटालीलाई विश्वको सबैभन्दा ठूलो आयातकर्ता, जैतुनको तेल पनि बनाउँछ।
मुख्य र्याकिंगले तपाईंलाई अचम्म नमान्न सक्छ, तर सूक्ष्मताले यसलाई फरक बनाउँछ। ग्रीसले लगभग २०% जैतुनको तेल उत्पादन गर्दछ इटाली संग नजिक प्रतिस्पर्धा, कि दुनिया मा खपत छ।
कठोर आर्थिक र राजनैतिक स crisis्कटको परिणामस्वरूप मुलुकमा धेरै मानिसहरु भेला भएका छन् कि ग्रीक जैतुनको तेल दुई कारणका लागि विशेष छ:
ग्रीसले उत्पादन गरेको ive०% जैतुनको तेल वर्जिनको तेल हो, विश्वको कुनै पनि जैतूनको तेल उत्पादन गर्ने देशलाई भन्दा बढी
ग्रीस एउटा त्यस्तो देश हो जुन विश्वमा सबैभन्दा बढी जैतुनको तेल खान्छ, यसको आहार र हजारौं परम्पराको कारण
यसको उत्पादन million० लाख एकडमा केन्द्रित छ, लगभग ,3000,००० कम्पनीहरूले जैतुनको तेल उत्पादन गर्न समर्पित गरी भूमध्यसागरको १०० विभिन्न किसिमका सुन उत्पादन गर्छन्।
जैतुनको तेल होमरले उल्लेख गरेको छ: यसको खपत पौराणिक छ।
टर्की संग अर्को देश हो जैतुन तेलको खपत र उत्पादनमा हजारौं परम्परा। यसको उत्पादन एजियन सागर वरपरको क्षेत्रमा केन्द्रित छ।
युरोप, एसिया र अफ्रिका बीचको यसको रणनीतिक स्थितिले यसलाई तीन महाद्वीपमा रहेका देशहरूबीच सम्बन्धको बजार सिर्जना गर्न अनुमति दिएको छ, जुन विश्वको सबैभन्दा ठूलो जैतून तेल उत्पादक देश हो।
टर्कीमा भद्राक्षका रूखहरूको संख्या यसको कुल जनसंख्याको भन्दा तीन गुणा अनुमान गरिएको छ। विश्व बैंकका अनुसार २०१ 2013 मा यो 74,9 250..XNUMX मिलियन छ। टर्कीभरि त्यहाँ करिब २ XNUMX० लाख भद्राक्ष रूखहरू छन्।
त्यहाँ धेरै प्रकारका छन् टर्कीमा जैतुनको तेलतर सब भन्दा प्रशंसनीय भनेको एजियन सागरको किनारमा रहेको आयुवलिक क्षेत्रमा उत्पादन गरिएको हो; यसको स्वाद धेरै जैतुनको तेलसँग मिल्दोजुल्दो छ जुन इटालियन टस्कनीमा निर्माण गरिन्छ।
ट्युनिशिया, आतंकवादबाट प्राप्त गरेको सजायको बावजुद, प्रदान गरिएको daesh र पहिले, 'अरब वसन्त' को कारण, यो बढ्दै जान्छ र नोट दिन जारी राख्छ।
केहीले उसलाई चौथो स्थान दिन्छन्, र उनको अवस्था केहि विशेष छ। हेरौं
ट्युनिसियाका लागि, जैतुनको तेलले सम्पूर्ण देशको कृषि निर्यातको %०% प्रतिनिधित्व गर्दछ, र संयुक्त राज्य अमेरिका जस्ता देशहरूमा विशाल बहुमत निर्यात गर्दै, र सबै भए पनि, इटाली र स्पेन।
वास्तवमा २०१ 2015 मा, यो जैतुनको तेल निर्यातमा विश्वको अगुवा थियो, इटाली र स्पेनलाई पछाडि पार गर्दै। यी देशहरूले खराब मौसम र प्रकोपका कारण वर्षहरूमा सबैभन्दा खराब फसलको सामना गरे।
समस्या यो हो कि स्पेन र इटालीले आयात गरे तर जैतुनको तेललाई आफ्नै बोतलले छोडे र ट्युनिसियाले भने तेलको उत्पादकको रूपमा मान्यता पाएनन्, स्पेनमा हुने तेलले इटालीमा निर्यात हुने तेलको रूपमा।
त्यो वर्ष, स्पेनमा निर्यात गरिएको तेल दोब्बर भयो, र इटालीमा निर्यात गरिएको यो वृद्धि तीन गुणा भयो।
यसैले, यो सुरु भएको छ ट्युनिसिया तपाईंको देशमा तेल बोतल राख्न अभियान, र उनीहरूसँग 'मेड इन ट्युनिसिया' (ट्युनिसियामा मेड) भन्ने लेबल छ।
हाम्रो छिमेकी मुलुक पनि जैतुनको तेल उत्पादकहरु मध्ये एक हो, र यो उपेक्षाको शिकार भैरहेको छ, तर यो बिस्तारै सुधार हुँदैछ। टर्की र ग्रीसको साथमा पोर्तुगालमा जैतुनको तेल पुरानो हो: यसको निर्माण रोमन साम्राज्य, अरब पेशा र आधुनिक समयको समय देखि हुन्छ। यसको उत्पादनको %०% भन्दा बढि उत्कृष्ट गुणवत्ताको कुमारी जैतूनको तेल हो।
सिरियाले एउटा डरलाग्दो समयको सामना गरिरहेको छ, चार वा पाँच पक्षको गृहयुद्धले देशलाई दण्डित गरेको छ, जहाँबाट यो विश्वास गरिन्छ, जैतुनको तेलको जन्म भएको थियो। यो मिथ्या हुन सक्दैन, राम्रो जैतुनको रूखको पहिलो प्रजाति सिरियामा years००० वर्ष पुरानो पुरानो भेट्टाइयो, भूमध्य बेसिनमा नपुगुञ्जेल सिरियाभरि फैलियो। युद्ध सुरु नभएसम्म, सिरियाले एक वर्षमा १ 165.000,००० टन जैतुनको तेल उत्पादन गर्‍यो। आशा छ सबै भन्दा पहिले नै जति सक्दो चाँडो सामान्य फिर्ता हुनेछ।
देशहरू जुन विश्वमा सबै भन्दा राम्रो जैतूनको तेल उत्पादन गर्दछ
हामीले त्यो देख्यौं स्पेन सबैभन्दा धेरै उत्पादन गर्ने देश होयो सर्वाधिक निर्यात गर्ने एक होइन, न त विश्वमा शुद्ध तेल बनाउने। अब, विश्वको सर्वश्रेष्ठ तेल कुन हो भनेर पत्ता लगाउन प्रतिस्पर्धा भएको थियो र सबैभन्दा नयाँ र सान्दर्भिक यो वर्षको शुरुमा न्यु योर्कमा भएको थियो जहाँ जैतुनको गुणस्तर, कटनीको समय यदि उनीहरूले तिनीहरू कहाँ छन् भनेर दावी गर्छन्, शुद्धताको स्तर, आदि।
जस्तो हामीलाई थाहा छ सबै भन्दा राम्रो वाइन कहाँ छ, हामी पत्ता लगाउन को लागी कोशिश गर्छौं संसारको सबै भन्दा राम्रो तेल कहाँ छ। यो त्यो प्रतिस्पर्धाको दर्जा हो:
5.- संयुक्त राज्य
स्पेनिशहरूले भद्राक्षका रूखहरूलाई त्यो ठाउँमा ल्याए जुन न्यु स्पेन, अहिले मेक्सिको थियो, जब तिनीहरूले अमेरिका उपनिवेश गरे। दक्षिणी संयुक्त राज्य अमेरिका, विशेष गरी क्यालिफोर्निया, त्यस देशको पहिले जैतूनको तेलको सब भन्दा ठूलो उत्पादक हो।
यो देश हो जुन हामी सबैले जैतुनको तेलसँग संगत गरेका छौं, होमर र ग्रीक पौराणिक कथाका उपन्यासहरूलाई धन्यवाद छ, र पक्कै पनि, किनकि यो भूमिको भूमध्यसागरीय भाइहरू, अन्ततः यसको भाग हो।
१ 168 जैतुनको तेलमध्ये १ सँग स्वर्ण पदक, र १ silver चाँदी थियो।
प्रतियोगितामा, पोर्तुगाली छिमेकीहरूले १ 15 स्वर्ण पदक र silver चाँदी पदकहरू प्राप्त गरे, र तीमध्ये १२ प्रकारका विभिन्न किसिमका विभिन्न विशेष स by्गठनहरू २०१6को सर्वश्रेष्ठ तेलहरू हुन्।
इटाली, स्पेन, टर्की र ग्रीससँग जैतुनको तेल उत्पादन र खपतको लामो परम्परा रहेको छ। इटालियन तेल, कुल। 99, 439पुरस्कार जीते। ती मध्ये best लेबल 'सर्वश्रेष्ठ', र बाँकी, सबै, स्वर्ण पदकहरूको साथ।
हो, हाम्रो देश पनि संसारमा सबै भन्दा राम्रो तेल छ, र प्रतियोगितामा गएको १136 बोतललाई, 733लाई पुरस्कृत गरियो: '' सर्वश्रेष्ठ 'लेबल, gold 53 स्वर्ण पदक र १ silver चाँदी, जसमा Spanish 17% स्पेनिश तेलहरू प्रदान गरिएको थियो।
साथै स्पेनी जैविक जैतूनको तेलले प्रतियोगिता जित्यो।
लेखको पूर्ण मार्ग: अर्थव्यवस्था वित्त » सामान्य अर्थव्यवस्था » हाम्रो बारेमा » जैतुन तेलको ठूलो उत्पादक
मैले डोलीबाट सिरियन जैतुनको तेललाई माया गरेँ, तर मैले फेरि फेला पार्न सकिन।
पूंजी नाफामा रहेको, बेच्ने वा प्रतीक्षा गर्ने?
कम वा उच्च औसत, यो शेयर बजारमा फाइदाजनक छ?